Diyaaradaha aan la saarnayn ee Maraykanka - BBC News Somali
Diyaaradaha aan la saarnayn ee Maraykanka
23 Luulyo 2010
Image caption Military waxay u yaqaanaan, UAVs (Unmanned Aerial Vehicles = Gawaarida cirka een la wadin) ama RPAS (Remotely Piloted Aerial Systems = Nidaamka hawada sare ee goobta fog laga hago). Hase yeeshee, waxaa sida guud loogu yaqaanaa drones.
Diyaaradaha meelaha fog laga hago, waxaa loo adeegsadaa xaaladaha diyaaradaha la duuliyo loo arko in ay Qatar ku galayaan ama ay ku adag tahay. Waxay ciidamada u tahay “Indho circa u jooga” 24-ka saac, todobada maalmood ee todobaadka.
Diyaarad kasta waxay hawada ku jiri kartaa ilaa 17 saacadood markiiba, iyadoo goob ku meeraysanaysa, dibna u diraysa dhaqdhaqaaqa ka socda dhulka sida uu u dhacayo.Waxa ugu wayn ee loo adeegsado.
Maxaa loo adeegsadaa?
• Sirdoon, dabagal, sahan • Hubinta bombooyinka wadada ama qalabyada yaalla goobaha lagu degayo • Dhagaysiga hadalada telefoonada gacanta lagu sheekaysto • Fahmidda dhaqan maalmeedka dadka deegaanka si loo arko dabeecadooda joogtaa ah • Taageero circa ah oo dhow • La socoshada ama weerarka goobaha kacdoonka
Kuwa ay isticmaalaan Ciidamada Cirka ee Maraykanka ama Ciidamada Cirka ee Boqortooyada, oo adeegsada diyaarado u qabta howlo sirdoon, dabagal iyo sahan, qaarkood fududaydkoodu wuxuu gaarayaa in gacanta laga tuuro marka hawada loo dirayo, qaar waa heer dhexe iyo diyaarado waawayn oo loo adeegsado sir ururinta.
Laba ka mid ah diyaaradaha, oo heerka dhexe ah ayaa ka howlgala gudaha Afghanistan iyo Pakistan ayaa ah noocyada Q-1B Predator iyo MQ-9 Reaper.
Diyaaradaha muuqaalkooda duwan yahay, waxaa saaraan oo sanka ay ku wataan dareemayaal: camero video oo duubaysa sawiro cad iyo madow ah, dadajiyayaasha sawirada, radar, qalabka iftiimiya sawirada marka meel mugdi ah laga soo qaado ama xaalado tayo liita lagu qaado iyo laser-o loo isticmaalo bartilmaameedsiga. Waxaa kaloo la saari karaa gantaallo laser-ka lagu hago.
Image caption Sida diyaaradahan u shaqeeyaan
Mid kasta oo ka mid ah diyaaradaha dhowrka million jooga ee noocyada Predator ama Reaper waxay ka kooban yihiin afar diyaaradood, xarunta laga hago oo dhulka ah iyo satellite isku xira.
Inkastoo, drones-ka aan la saarnayn, hadana ma aha in aan la wadin. Shaqaale tababaran oo jooga xarunta ayaa isteersada u haya ama haga, iyagoo fasira sawirada marka ay kaamarooyinka dib ugu diraan xarunta, waxaana ay qaadaan tallaabo marka ay la noqoto in ay arkeen arrin u baahan in la bartilmaameedsado.
Xarunta waxaa dhici karta in ay tahay mid aan ka fogayn goobta weerarka ama in ay dhowr kun oo mile u jirto – inta badan weerarada ama howlgalada diyaaradaha aan la saarnayn loo isticmaalo ee gudaha Afghanistan waxaa laga maamulaan saldhigga ciidanka circa ee Creech oo ku yaalla Nevada, Maraykanka – inkastoo kicintooda iyo dajintooda inta badan laga maamulo meel aan ka fogayn halkaas.
Nooca MQ-1B Predator (oo horay loogu yeeri jiray RQ-1 Predator) ayaa horay waxaa loogu qorsheeyay in ay noqoto diyaarad loo adeegsado uruurinta sirta, dabagalka, tilmaamida bartilmaameed iyo sahan.
Hase yeeshee, tan iyo 2002 waxaa ka saaraa gantaalaha loo yaqaan Hellfire II missiles, oo macnuhu noqonayo in ay weerar ka qaadi karto meel ilaa 8km (five miles) jirta.
Taa badalkeeda nooca ka cusub ee MQ-9 Reaper waxaa loo arkaa in ay tahay nidaam "ugaarsi-dil ah".Waxay qaadi kartaa ilaa afar gantaalaha Hellfire iyo bombooyinka laser-ka lagu hogaamiyo sida Paveway II iyo GBU-12.
Heerka ay ku duusho waa 370kph (230mph), taasoo aad uga dheeraysa 217kph (135mph) ee nooca Predator, taasoo u nugul in la soo ridi karo marka ay meel hoose ku duulayso – inkastoo inta badan diyaaradaha aan la saarnayn ay ku duulaan meelo aysan gaarin inta badan noocyada hubka ee Taliban ay haysato. Diyaaradaha aan la saarnayn ma horseedi karaan ‘dagaalka – robot-yada’?
Image caption Diyaaradaha aan la saarnayn
Ciidamada Britain waxay isticmaalaan noocyo kala duwan oo diyaarado meel fog laga hago ah. Ciidamada Britain waxay isticmaaleen Hermes 450 UAV gudaha dalka Iraq iyo Afghanistan, iyo sidoo kale kuwa yar yare e UAVs si ay gacan uga gaystaan hubinta bombooyinka waddooyinka dhinacooda lagu qariyo ka hor inta aysan u ambabixin roondaynta waddooyinka. Sanadka 2011, Hermes 450 ayaa waxaa loo dalacsiin doonaa Watchkeeper taasoo sida nooca Reaper, hub la saari karo.
RAF, waxay leeyihiin afar diyaaradooda oo qalabkoodu sareeyo oo nooca Reaper ah, waxaan dadka haga ay ku sugan yihiin saldhigga ciidanka circa ee Creech. Laba kale ayaa lagu wadaa in ay howlgalaan sanadkan 2010 waxaana wasaaradda gaashaandhiggu ay eegaysaa amarka dowladda Maraykanka ee in la helo shan diyaaradood oo kale oo nooca Reaper UAVs iyo afar xarumood oo dhulka ah oo laga maamullo.
July 2010, Wasaaradda gaashaandhigga ee UK, waxay daah rogtay nooca Taranis, waa nooc baabuurta circa ee dagaalka oo aan la saarnayn, waxaana loo qaabeeyay in uu awood u yeesho caabinta weerarada iyo sidoo kale in ay qabato howsho uruurinta sirta, dabagalka iyo doorka duqaynta ee UAVs-ka kale.
Sanadihii ugu dambeeyay, waxaa sii kordhayay cilmi-baarista iyo horumarinta diyaaradaha aan la saarnayn, taasoo horseedaysa saadaasha ah dagaalka mustaqbalka ee robot-ka "robo-wars".
Indho dusha kaa soo eegaya
Sahan hubeysan, sahan iyo bar tilmaansasho Waxa loo adeegsado Hubka nooca Hunter-killer
14.8m (48.7ft) Dhereka baalasha 20.1m (66ft)
8.2m (27ft) Dhererkeeda 11m (36ft)
204kg (450lb) Culeyska ay qaaddo 1,701kg (3,750lb)
135-217kph (84-135 mayl saacaddiiba) Xawaaraha 370kmsaacaddiiba (230maylsaacaddiiba)
1,240k, (770 mayl) Fogaanta ay gaari karto 1,850k (1,150 mayl)
Laba Gantaal oo nooca Hellfire ah Hub Hellfire, Paveway II iyo GBU-12 JDAM oo la isu geeyay
Laba: hal duuliye iyo qof ka shaqeysiiya aaladda wax dareenta; iyo isuduwaha hawlgalka marka loo baahdo Shaqaalaha Laba: hal duuliye iyo qof ka shaqeysiiya aaladda wax dareenta; iyo Isuduwaha hawlgalka marka loo baahdo
$20m unuggiiba (oo ka kooban afar dayaaradood, saldhigga dhulka ee laga hago iyo isku xirka dayax-gacmeedka) Qiimaha Unug kasta $53.5m unug kasta (oo ka kooban afar dayaaradood, saldhigga dhulka ee laga hago iyo isku xirka dayax-gacmeedka)
130 Inta hadda hawlgasha Ciidanka Cirka ee Mareykanka 47
- Ciidanka Cirka ee UK 4